Sajhasabal.com | Homeकहिले संरक्षण गर्ने धामीले उजाडेको त्यो दलित बस्ती ?
प्रेम सुनार, भदौ १७ बुटवल । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । हाम्रो समाज अझै पनि कुन दुनियाँमा छ ? अझै पनि बोक्सी, धामी झाँक्रिको बिश्वास र त्रासमा छन मानिसहरु । घना गुल्मीको मदाने गाउँपालिका भित्र एक टोलको हो । जहाँ एउटी धामी काम गर्ने महिलाले यो टोल अशुभ छ अब छिटै क्रमश सवै मर्छौ भने पछि मानिसहरु गाउँ छाडेर अर्कै स्थानमा बसाई सराई गरेका छन । मदाने गाउँपालिका वडा नम्वर– २ , साविकको बाँझकटेरी १ , शुभे गाउँको कथा हो यो । २०७१ सालमा त्यस गाउँका ६३ वर्षिय मनबहादुर परियारको मृत्यु भएको थियो । त्यसको ३ वर्ष पछि २०७४ साल भदौ ६ गते उनका जेठा छोरा रने परियारको ३१ बर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।